Real Madrid oo Afar ciyaaryahan u bandhigtay Man United si ay uga hesho Paul Pogba – Gool FM
(Madrid) 28 Maajo 2020. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa la soo warinayaa inay Man United u bandhigtay afar ciyaaryahan oo ay ku jiraan James Rodriguez iyo Martin Odegaard, sida ay uga soo qaadato Paul Pogba.
Tababaraha Kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa muddo dheer jeclaa xiddiga Faransiiska kula guuleystay Koobka Adduunka ee Pogba, kaasoo inta badan xilli ciyaareedkaan garoommada ugu maqnaa arrimo la xiriira dhaawac canqowga ah.
Si kastaba ha noqotee, Real Madrid ayaa weli xiiseyneysa inay la soo wareegaan Pogba, iyagoo dareemaya inay heshiis isdhaafsi ah ku heli karaan, waxaana heshiiskaan sidoo kale ku lug leh Lucas Vazquez iyo Brahim Diaz, sida laga soo xigtay Wargeyska The Sun, inkastoo Man United ay ku adkeysaneyso in ciyaaryahankooda uusan iib ahayn.
Warbixinta ayaa faahfaahin ka bixineysa in macallinka Man United ee Ole Gunnar Solskjaer uu doonayo inuu Pogba dib ugu soo laabto safkiisa hore marka kubadda cagta ay dib u soo laabato.
Solskjaer ayaa doonaya in labadiisa ciyaaryahan ee Pogba iyo xiddiga uu la soo wareegay bishii Janaayo ee Bruno Fernandes uu ku mideeyo khadkiisa dhexe, iyadoo ay xusid mudan tahay in labadaan laacib ay isbuucaan tababarka wada qaateen.
Pogba ayaa kaliya ciyaaray labo jeer tan iyo bishii September, mana uusan dheelin tan iyo maalmihii feerka ee Boxing Day, laakiin waxa uu dib ugu soo laaban doonaa ciyaarista kubadda cagta maadaama uu si buuxda uga soo kabsaday dhaawac uu la maqnaa.
Real Madrid ayaa lagu soo warramayaa inay isha ku heyso inay la soo wareegto bartilmaameedyada muhiimka ah xagaagaan, laakiin sababtoo ah dhibaatada Coronavirus ee kooxaha Yurub dhaqaale ahaan saameyn ku yeeshay, kooxda La Liga ayaa raadineysa heshiisyada isdhaafsiga si ay u xaqiijiso bartilmaameedyada suuqa kala iibsiga.
Rodriguez oo laga soo iibsaday Monaco kaddib markii uu bandhig cajiib ah ka sameeyey Koobkii Adduunka ee 2014, waligiis kuma soo bixin oo sidii la rabay kuma noqon garoonka Bernabeu, wuxuuna amaah labo sano ah ku soo qaatay kooxda Bayern Munich intii u dhaxeysay 2017 illaa 2019.
Dhanka kale, Odegaard waxaa lala saxiixday isagoo 16-sano jir ah bishii Janaayo 2015-kii, laakiin kaliya labo jeer ayuu u saftay kooxda koowaad, wuxuuna haatan ku jiraa kooxdiisii saddexaad ee amaah uu kula joogo waana Real Sociedad, kaddib markii uu horay u soo maray Kooxaha SC Heerenveen iyo Vitesse Arnhem.
Laacibka khadka dhexe ee wax weerara, Vazquez ayaa ka soo baxay akadeemiga Madrid, halka Diaz laga soo iibsaday Manchester City bishii Janaayo ee la soo dhaafay.